Ukushisa kuyancibilika iMallorca | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinsuku zokugcina zikaJulayi nezokuqala zika-Agasti kusha kakhulu kuso sonke isiqhingi saseMallorca. Amazinga okushisa okuthi, yize emini ephakeme kakhulu, ebusuku, okuyilapho kufanele ehle khona, awenzi ngokwanele.
Yiziphi izindinganiso esikhuluma ngazo? Kokunye okuncibilikise lesi siqhingi izinsuku ezimbalwa: ama-36, ama-39 degrees ... Sebefinyelele ngisho ku-41ºC. Kepha okubi kakhulu akusikho ukuthi: umswakama uphakeme kakhulu, uzungeze ama-70%, obangela ukuzwa okushisayo kube ngamadigri amaningana aphezulu.
Sigcwele isikhathi se-canicular futhi lokhu kuyaqashelwa ezingxenyeni eziningi zaseSpain, ikakhulukazi engxenyeni eseningizimu yeNhlonhlo Yase-Iberia nasesiqhingini saseBalearic. Sesizofinyelela maphakathi nehlobo futhi sesivele sidlule kwababili amagagasi okushisa, nangesiqephu sokushisa esikhombisa ukungabi nabubele neMallorca.
Isikhungo Sezemvelo Sombuso igcina isexwayiso se-orenji ngengozi yamazinga okushisa afinyelela ku-39ºC engaphakathi nasenyakatho-ntshonalanga yesiqhingi, futhi isexwayiso esiphuzi ngengozi yamazinga okushisa afinyelela ku-37ºC okusele. Isimo esingahlala kuze kube yiSonto, usuku okulindeleke ukuthi ama-maximal wehle okungenani ama-degree ama-4 uma kuqhathaniswa nalawo okwamanje aqoshiwe.
Kuze kube manje, amazinga okushisa aphakeme kakhulu kurekhodi yilawa:
ISanta María: 40,4ºC
IPalma, iNyuvesi: 40,3ºC
Ubuncane nabo bebuphakeme kakhulu: ngokwesibonelo, ePalma University ababhalisanga ngaphezulu noma ngaphansi kuka-24ºC, kanti eSierra de Alfabia (Bunyola), babene-23ºC. Leyo kukhona ubusuku obushisayo, njengoba i-mercury inyuka isuka ku-20ºC. Kodwa into emangalisa kakhulu ukuthi ubusuku bango-Agasti 1 kwezinye izindawo babushisa izolo; ngenhla kuka-35ºC, njengoba kushicilelwe yi-AEMET de Baleares Twitter.
Isithombe - Diariodemallorca.es
Ngenhlanhla, isimo sizothuthuka kancane ezinsukwini ezizayo. Kepha uma usesiqhingini, qaphela futhi ungazivezi elangeni ngezikhathi eziphakathi nosuku nangaphansi kokuvikelwa 😉.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ukushisa kuncibilikisa iMallorca